Online Hartha - Page2of 704 - News and Entertainment
May 27, 2022 by Online Hartha
ဘယ်အချိန်မှာ ကားဘရိတ်စစ်ဆေးပြုပြင်သင့်လဲ ? မော်တော်ကားရဲ့ ဘရိတ်စနစ်ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့စနစ်ဆိုတာ အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဂီယာမကောင်းလို့ ကားထိုးရပ်သွားနိူင်ပေမယ့် ကားဘရိတ်မကောင်းရင်တော့ အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့နိူင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားဘရိတ်စနစ်ကိုလည်း ပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်မှုပြုလုပ်သင့်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားဘရိတ်စနစ်မှာ ရှေ့ဘရိတ်ကို ဒစ်ဘရိတ် (Disc Brake) အသုံးပြုပြီး နောက်ဘရိတ်ကို ဒရမ်ဘရိတ် (Drum Brake) အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာတော့ ကားလေးဘီးလုံး ဒစ်ဘရိတ်စနစ်ကို အသုံးပြုတာလည်းရှိပါတယ်။ ဘရိတ်စနစ်မှာ ဘရိတ်ပတ် (Brake Pad) ၊ ဘရိတ်ရူး (Brake Shoe) နဲ့ ဘရိတ်ဆီတွေက သတ်မှတ်ကာလတခုမှာ ပုံမှန်လဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းနှင်နေရင်း ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့အခါ ဘရိတ်လျောခြင်း၊ ဘရိတ်မှ အသံမြည်ခြင်း၊ ဘရိတ်နင်းစဉ် ကားတုန်ခါမှုဖြစ်ခြင်း၊ ကားဒိုင်ခွက်မှာ ဘရိတ်ချက်မီးလင်းခြင်း စတဲ့ ပြစ်ချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဘရိတ်စနစ်ကို ချက်ချင်း … Read more
အိမ်တွေမှာ မစိုက်သင့် မစိုအပ်တဲ့သစ်ပင်များ
May 25, 2022 by Online Hartha
နေအိမ်ရဲ့ အရှေ့မြောက်အရပ်ဘက်မှာရှောက်ပင်၊ရှားပင်၊ဖရုံပင်၊သံပုရာပင်၊သရက်ပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ အရှေ့အရပ်ဘက်မှာနံနံပင်၊ထနောင်းပင်၊ထန်းပင်၊ထိန်ပင်၊တည်ပင်၊ပိတောက်ပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်အရပ်မှာသီးပင်၊ကသစ်ပင်၊သန်းပင်၊သီဟိုဠ်ပင်၊ဒဟတ်ပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ တောင်အရပ်ဘက်မှာဗူးပင်၊ယင်းမာပင်၊ပျဉ်းမပင်၊ပေါက်ပင်၊ပေါက်ပန်းဖြူပင်၊ပိန်းပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ အနောက်တောင်အရပ်ဘက်မှာကြံပင်၊ကုက္ကိုပင်၊ကံကော်ပင်၊ကျွန်းပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ အနောက်အရပ်ဘက်မှာဝါပင်၊ဝါးပင်၊ရဲယို၊ရွက်လှပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ အနောက်မြောက်အရပ်ဘက်မှာအုန်းပင်၊အင်ပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ နေအိမ်ရဲ့ မြောက်အရပ်ဘက်မှာဇီးပင်၊စပယ်ပင်၊ဇွန်ပင်၊ဇော်စိမ်းပင်များမစိုက်သင့်ပါ။ “အဘဝိဇ္ဇာဒေါက်တာမင်းသိခ်၏တပြည့်ရင်း” စာရေးဆရာ သာထက်ဇော်(မကွေး) တဲရော့၊ဗေဒ၊လက္ခဏာ…။ Crd Unicode Version နအေိမျရဲ့ အရှမွေ့ောကျအရပျဘကျမှာရှောကျပငျ၊ရှားပငျ၊ဖရုံပငျ၊သံပုရာပငျ၊သရကျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အရှအေ့ရပျဘကျမှာနံနံပငျ၊ထနောငျးပငျ၊ထနျးပငျ၊ထိနျပငျ၊တညျပငျ၊ပိတောကျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အရှတေ့ောငျဘကျအရပျမှာသီးပငျ၊ကသဈပငျ၊သနျးပငျ၊သီဟိုဠျပငျ၊ဒဟတျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ တောငျအရပျဘကျမှာဗူးပငျ၊ယငျးမာပငျ၊ပဉျြးမပငျ၊ပေါကျပငျ၊ပေါကျပနျးဖွူပငျ၊ပိနျးပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အနောကျတောငျအရပျဘကျမှာကွံပငျ၊ကုက်ကိုပငျ၊ကံကျောပငျ၊ကြှနျးပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အနောကျအရပျဘကျမှာဝါပငျ၊ဝါးပငျ၊ရဲယို၊ရှကျလှပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အနောကျမွောကျအရပျဘကျမှာအုနျးပငျ၊အငျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ မွောကျအရပျဘကျမှာဇီးပငျ၊စပယျပငျ၊ဇှနျပငျ၊ဇျောစိမျးပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ “အဘဝိဇ်ဇာဒေါကျတာမငျးသိချ၏တပွညျ့ရငျး” စာရေးဆရာ သာထကျဇျော(မကှေး) တဲရော့၊ဗဒေ၊လက်ခဏာ…။ Crd —————– နအေိမျရဲ့ အရှမွေ့ောကျအရပျဘကျမှာရှောကျပငျ၊ရှားပငျ၊ဖရုံပငျ၊သံပုရာပငျ၊သရကျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အရှအေ့ရပျဘကျမှာနံနံပငျ၊ထနောငျးပငျ၊ထနျးပငျ၊ထိနျပငျ၊တညျပငျ၊ပိတောကျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အရှတေ့ောငျဘကျအရပျမှာသီးပငျ၊ကသဈပငျ၊သနျးပငျ၊သီဟိုဠျပငျ၊ဒဟတျပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ တောငျအရပျဘကျမှာဗူးပငျ၊ယငျးမာပငျ၊ပဉျြးမပငျ၊ပေါကျပငျ၊ပေါကျပနျးဖွူပငျ၊ပိနျးပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ နအေိမျရဲ့ အနောကျတောငျအရပျဘကျမှာကွံပငျ၊ကုက်ကိုပငျ၊ကံကျောပငျ၊ကြှနျးပငျမြားမစိုကျသငျ့ပါ။ … Read more
စပယ်ပန်းများ ခူးမနိုင်အောင် အပွင်များများပွင့်စေမည့် နည်းလမ်းများ
လေတိုက်ချိန်မှာ စံပယ်ပန်းရနံ့သင်းသင်းလေးများ ရရင် အလွန်ကိုစိတ်ကြည်နူးစရာပါနော်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လို အကြိုက်တူသူများအတွက် အိမ်မှာ စိုက်ထားရင်လည်း ဝေဝေဆာ ဆာပွင့်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကို မျှဝေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ၁။ စံပယ်ပင်လေးတွေစိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အိုးနဲ့စိုက်မှာလား၊ မြေမှာ ချပြီးစိုက်မှာလား… ရွေးပါ။ အိုးနဲ့စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အိုးက ရေမဝပ်အောင် အောက်ခြေမှာ အပေါက်လေးတွေပါတဲ့အိုးနဲ့ စိုက်ပါ။ မြေမှာ စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရေမဝပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ ၂။ စံပယ်ပင်လေးတွေဟာ နေရောင်ကြိုက်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ ၃။ စံပယ်ပင်လေးတွေကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ရေလောင်းပါ။ ရေလောင်းတဲ့အခါမှာ အောက်ခြေမြေကြီးကိုပဲ လောင်းပါ။ သစ်ရွက်လေးတွေကို ရေမစိုပါစေနဲ့။ စံပယ်ရွက်လေးတွေကို ရေစိုသွားရင် နေရောင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာ အရွက်လေးတွေပုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ၄။ စံပယ်မျိုးစိတ်အများစုက နွယ်တက်တတ်ပါတယ်။ စံပယ်ပင်နားမှာ တိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ စင်လေးဖြစ်ဖြစ် ထားပေးပါ။ ၅။ … Read more
မိမိနေအိမ် ပျားစွဲက ပျားစွဲရာနေရာအလိုက် အတိတ်နိမိတ်များ
သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားစွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်များ ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာခေတ်မှီနည်းပညာတွေနောက်ကို လိုက်နေကြတဲ့ အတွက် အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ ပက် သက်လာရင်သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက်ဗဟုသုတရအောင်ပျားရည်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်တေကိုတငပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)ဘယ်ဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက ငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂)ညာဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက စီးပွားပျက်တတ်ပါတယ်နော်။ (၃)အိမ်ခေါင်မိုး ထုတ်တန်းမှာ ပျားစွဲပါကစီးပွားပျက်တတ်ပါတ ယ်။ (၄) ရေအိုး၌ ပျားစွဲပါက သူဌေးဖြစ်မှာပါ။ (၅)အဝတ်ပုဆိုး ၌ ပျားစွဲပါက ချမ်း သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၆)အိပ်ရာအောက် ၊ သင်ဖြူးဖျာအောက်၊ ထမင်းအိုး၌ ပျားစွဲ ပါက ကောင်းသောနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၇)အထက်ဖျားဝါးပေါ်၌ ပျားစွဲ ပါက ရှိသမျှ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကုန်တတ်ပါတယ်။ (၈)အရှေ့မှလာပြီးပျားစွဲပါကအငြင်း အခုံ ကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။ (၉)အရှေ့တောင် ကနေ လာပြီးတော့ … Read more
(၂၂) ရက်နေ့ မှ(၂၈) ရက်နေ့အတွင်းမှာ ရွှေမိုး ငွေမိုးတွေရွာမယ့် တိုင်းနှင့် မြို့ကြီးများ
May 22, 2022 by Online Hartha
(၂၂) ရက်နေ့ မှ(၂၈) ရက်နေ့အတွင်းမှာ ရွှေမိုး ငွေမိုးတွေရွာမယ့် တိုင်းနှင့် မြို့ကြီးများ ရွှေမိုး ငွေမိုး 🌧🌧🌧🌧🌧 အနောက်တောင်လေများက ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှ ယူလာတဲ့ မိုးစက်ကလေးတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ရွာသွန်းပေးမယ့်မိုးတွေလာပြန်ပါပြီနော်…။ ၂၀၂၂လမေလ ၂၂ရက်နေ့ မှ ၂၈. ရက်နေ့အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွေရဲ့အပေါ် မုတ်သုန်လေဆွဲတင်စနစ် UACအထက်လေဝဲစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အညာမြေမိုးနည်းရပ်ဝန်းတွေဆီသို့ မိုးများခေါ်ယူပေးပါလိမ့်မယ်….။ ရက်ဝးရက်နီး update ခန့်မှန်းပေးနေပါမယ်….။ ခန့်မှန်းချိန် 22/05/2022 at 5:18AM(MMT) မင်း ဂွတ် သီး Unicode Version (၂၂) ရကျနေ့ မှ(၂၈) ရကျနအေ့တှငျးမှာ ရှမေိုး ငှမေိုးတှရှောမယျ့ တိုငျးနှငျ့ မွို့ကွီးမြား ရှမေိုး ငှမေိုး 🌧🌧🌧🌧🌧 အနောကျတောငျလမြေားက ကြောကျဆောငျတှကွေားမှ ယူလာတဲ့ … Read more
ကားစီးရင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် အမြဲ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
ကားစီးရင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် အမြဲ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ။ ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ်။ ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမိရင် လူကမူးမော့နေတာ၊ တစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက လိုက်လာတာပါ ဆရာမကပြောတယ်။ ကားမူးရင် ဖယောင်းတိုင် ရင်ဘက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လုံးဝကောင်းတယ် လက်တွေ့တဲ့ ဆရာမပြောပြောချင်းတုန်းက နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်။ ကားမူးတာနဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ဘာဆိုင်လည်းပေါ့။ဆရာမစကားဆိုတော့လည်း နားထောင်ရတာပေါ့ ။ အဲလိုနဲ့ ကျတော် ရွှေတောင်ဦးနားကားရပ်တော့ စတိုးဆိုင်မှာ ဖယောင်းတိုင်ဆင်းဝယ်ပြီး၊ရင်ဘက်ထဲ တစ်ဖက် သုံးချောင်းဆီကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ကကောင်မလေးက အမ … Read more
လုပ်ငန်းကောင်းလိုသူများ အတွက် ကံပွင့်လာဘ်ရွှင် အစီအရင်
လုပ်ငန်းကောင်းလိုသူများ အတွက် ကံပွင့်လာဘ်ရွှင် အစီအရင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကံပွင့်လာဘ်ရွှင် အစီအရင်နှင့် ဂါထာမန္တာန် ငွေကြေး လာဘ္လာဘ ပေါများလို သူမ်ား လုပ်ငန်းကောင်းလို သူမ်ား အတွက် ဖန်ခွက်တခွက်ထဲ တွင် ဆန်ထည့် ပါ ခရင်းတချောင်း ပြောင်းပြန် စိုက်ပါ ။ ခရင်းပေါ် တွင် ကွမ်းယာစိုက်ပြီး ကောင်တာခုံ၊ စားပြဲ၊ အမြင့်တစ်နေရာတွင် တင်ထား၍ အောက်ပါ ဂါထာလာဘ်ခေါ်မန္တာန် ကို (၂၇) ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပါ ။ အရဟံ ဗုဒ္ဓေါ အရဟံ အရဟံ ဗုဒ္ဓေါ ဗုဒ္ဓဿ ဂုဏ်တေဇသာ သဗ္ဗသိဒ္ဓိ လာဘံ မေ ဘဝိဿတိ အေလးအနက္ထား၍ ရွတ်ဆို ဆုတောင်းပါ ။ အဆင်ပြေလာပါ လိမ့်မည် … Read more
စိုက်ပျိုး မြေဆီလွှာများပင်ပန်းလာတဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်သောအချက်များ
May 21, 2022 by Online Hartha
မြေဆီလွှာများပင်ပန်းလာတဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်သောအချက်များ တောင်သူကြီးများခင်ဗျာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အဖိုးတန်လယ်မြေတွေဟာ သီးနှံများ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် စိုက်ပျိုးလာတဲ့အခါ မြေဆီလွှာပန်းလာပြီး အာဟာရဓာတ်များ တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီးနှံ အထွက်တိုးဖို့ရာအတွက် မြေသြဇာများ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။ ယခုလို မြေသြဇာ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲ လာတဲ့အချိန်မှာ မြေဆီလွှာအာဟာရဓာတ်များ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အောက်ပါ သဘာဝ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ။ နွားချေးဆွေး ကြက်ချေးဆွေးကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန် အညစ်အကြေး ဆွေးများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခြင်း စပါးခွံဖွဲပြာများ အသုံးပြုခြင်း ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်သစ်စိမ်းမြေသြဇာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း တီကျစ်စာ ၊ အီးအမ် အရည် များအသုံးပြုပေးခြင်း သီးနှံပင်အကြွင်းအကျန်များကို မီးမရှို့ဘဲ ဆွေးအောင်ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း မြေဆီလွှာအကျိုးပြု ပဲမြစ်ဖုများ ထည့်သွင်းပေးခြင်း ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာကဲ့သို့ဆီထွက်သီးနှံများမှ ဆီကြိတ်ဖတ်များ ကို … Read more
စီးပွားဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝစေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း
စီးပွားဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝစေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ကန်တော့ပွဲသုံး ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုရမည်…။ (၁) အုန်းသီးတစ်လုံး (၂) ငှက်ပျောသီး(၃)ဖီး (၃) ကွမ်း ၊ ကွမ်းသီး ၊ ထုံး ၊ ဆေး (၄) သပြေပန်း (၅) ထီး ၊ တံခွန် ၊ ကုက္ကား ၊ မုလေးပွား ၊ ယပ် ၊ ကြက်လျှာအစုံ (၆) ဆီမီး(၁)တိုင် (၇) ရေတစ်ခွက် (၈) ခံတောင်း(သို့)ဇလုံတစ်ခု (၉) အခြားလှူဒါန်းဖွယ်ရာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည် မိမိနေအိမ်ရှိ ဘုရားခန်း၌ ပြုလုပ်နိုင်သည် … Read more